पल र पूजाको लप पर्ने कहिले हो ? « Ramailo छ
पल र पूजाको लप पर्ने कहिले हो ?
'म यस्तो गीत गाउँछु' नयाँ गीत रिलिज
असार ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को नयाँ गीति भिडियो रिलिज गरिएको छ । ‘किन आजकाल’ बोलको गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत तथा स्वर छ भने शब्द अम्बिका शर्माले लेखेकी छिन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा पल शाह र पूजा शर्मा फिचरिङ छन् । भिडियो यस्तो बनेको छ :
डान्सिङ नम्वरको गीतको भिडियो रमाइलो बनेको छ । अडियो जुक वक्समा हिट भैसकेको गीतको भिडियोले दर्शकलाई थप आकर्षण गर्छ । लोकेशन, क्यामेरा, कस्ट्युम र कलाकारको तालमेल मिलेको छ । संजय लामाले फरक फरक सुन्दर लोकेशन खिचेका छन् । सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा पल र पूजा मुख्य भूमिकमा प्रस्तुत भएका छन् । साँगीतिक लभ स्टोरी फिल्मको गीत, संगीत तथा प्रोमोले चर्चा पाइरहेको छ ।